Macallinkii Weynaa Ee Trapattoni Oo Juventus Kula Taliyey In Ay Iibiso Pogba
HomeWararka MaantaMacallinkii Weynaa Ee Trapattoni Oo Juventus Kula Taliyey In Ay Iibiso Pogba
07/02/2015 Abdiwahab Ahmed
Giovanni Trapattoni ayaa kula taliyey Juventus in ay iska iibiso laacibkeeda khadka dhexe ee Paul Pogba marka uu furmo suuqa kala iibsiga ciyaartooyadu bisha June ee sannadkan.
Waxa jiray warar suuqa ka dhex guuxayay oo bishii January saadaaliyey in ay Juventus iibinayso Pogba iyadoo si gaar ah farta loogu fiiqay Real Madrid.
Wakiilka laacibkan Faransiiska ah ee Mino Raiola ayaa tibaaxay in kooxda dooneysa Pogba ay bixin doonto €80 million, taas oo la mid ah lacagtii ay Real Madrid shan sannadood ka hor ku iibsatay Cristiano Ronaldo.
Ruug caddaaga ahna tababare hore, Trapattoni oo u warramay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay in ay nacasnimo tahay in Juventus ay iska haysato ciyaartoygan oo ay ka faa’iidaysan weydo lacagta badan ee ay kooxuhu diyaarka ula yihiin in ay ku iibsadaan.
“Haddii kooxdu ay dooneyso in ay wax waalli ah ku samayso ciyaartoyga, waa in sida iyada u fiican loo daayo, laakiin Pogba waa ciyaartoy weyn, mase aha Messi. Waa nacasnimo in la diido in lagu iibiyo €100m. Juventus waxa ay lacagtaasi u goyn doontaa saddex ciyaartoy oo tayo sare leh.” Ayuu yidhi Trapattoni oo u warramay Tuttosport.
Trapattoni waxa uu kula taliyey Juventus in lacagta ay ka qaataan Pogba aanay ku iibsanin hal ciyaartoy oo kaliya laakiin ay u isticmaalaan in ay kaga faa’iidaystaan suuqa oo ay ku soo xero geliyaan ciyaartooyo kale.
Juventus waxa ay ku guuleysatay saddexdii horyaal ee ugu dambeeyey, waxaanay ku dhow dahay in ay markii 4aad oo xidhiidh ah hoggaanka loo caleemo saaro. Waxa ay toddoba dhibcood oo saafi ah ay ka horreysaa kooxda kaalinta labaad ku jirta ee Roma.
France Oo Dirqi Kaga Badiyey Romania Ciyaartii Furitaanka Euro 2016
Zidane Oo Meesha Ka Saaray In Ciyaartooyo Ka Tegaya Real Madrid Bisha January
Isku Aadka Koobka Qaramada Afrika Oo La Shaaciyey Iyo Groupka Waallida Oo Ay Ku Wada Jiraan Quwaddii Afrika
04/12/2014 Abdiwahab Ahmed